February 2018 - Shop
How to dress up likeaPRADA Model with Shop App
Shop > All Articles > 2018 > February
၇၀ရာခိုင်နှုန်းထိလျှေ့ပေးတဲ့ Philips Week မတ်လ ၇ရက်နေ့အထိ တစ်နိုင်ငံလုံးကုို ပို့ခ အခမဲ့နဲ့ပြန်လာပြီနော်။0364
The KaungHtet February 26, 2018 12:16 pm May 3, 2018
မနှစ်ကဒီလိုအချိန်မှာPhilips Week ကနေပြီးပစ္စည်းတွေဝယ်ရတဲ့ဈေးနဲ့တန်လိုက်တာကွာ ဆိုပြီးတဖွဖွရွတ်မိတယ်မှတ်လား။ စိတ်မပူပါနဲ့။ Shopကနေပြီး လျှော့ဈေးတွေကိုပြန်လည်အသက်သွင်းပေးလိုက်ပါပြီ။ ဒီနှစ်လည်းမနှစ်ကလိုပဲ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းထိလျှော့ဈေးတွေကို ပေးသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းစာဖတ်သူတွေကိုိ အခွင့်အခါကောင်းတွေပဲ သယ်လာပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့ကိုယ်တွေအတွက် ဒီလိုshopကနေပြီး Philips Week ပြန်လုပ်မယ်ဆိုတော့ စိတ်တွေလှုပ်ရှားပြီး အလျင်အမြန်ပဲ အချက်အလက်တွေကိုစုရေးပြီး သတင်းကောင်းလာပါးလိုက်တာပါ။ Philips …
Shop Is Bringing Back Up To 70% Off Philips Week from Yesteryear Plus Free Delivery to Every Part of Myanmar Until 7th of March0333
The KaungHtet February 26, 2018 12:16 pm June 8, 2018
You might have mumbled “this cheap shouldn’t look this good” about Phillips gadgets you bought from Philips Week in the …
OMG ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အစားအသောက်ကုမ္ပဏီကြီးက shop မှာ Baby Fair လုပ်မယ်တဲ့။0310
The KaungHtet February 23, 2018 11:35 am May 3, 2018
ကမ္ဘာပ်ါမှာ အကြီးဆုံးစားသောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ သတ်မှတ်ခံရတဲ့ Nestle’ ကုမ္ပဏီက shop နဲ့ပူးပေါင်းပြီး Baby Fair ကို မတ်လ ၁ရက်ကနေ၊ ၁၅ရက်နေ့ထိ ပြုလုပ်ပါမယ်။ Forbes မဂ္ဂဇင်း အရ Nestle’ ကုမ္ပဏီက ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးစားသောက်ကုန် …
OMG, World’s Largest Food Company is having babies fair at shop!!!!0347
The KaungHtet February 23, 2018 11:33 am June 8, 2018
Since 2014, Nestle’ has been the largest food company in the world according to Forbes Magazine. And now, shop and …
ခရီးသွားခြင်းကိုရူးသွပ်သူများအတွက် Mirandus ဒါမှမဟုတ် ရွှေအိုရောင်လတ်မှတ်0329
The KaungHtet February 20, 2018 5:26 am August 9, 2018
Shop.com.mmကနေပြီးတော့ ခရီးသွားများအသက်သာဆုံး၊အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်စေနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ခရီးသွားကုမ္မဏီတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး Mirandus ကို အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ခရီးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာ အထုပ်အပိုးတွေထည့်တာကနေစပြီး ကားဂိတ်ရောက်တဲ့ထိ ပြသာနာပေါင်းစုံ အခက်အခဲပေါင်းစုံ ကြုံရတက်ပါတယ်နော်။ ဒီတော့အခုလာမဲ့ နွေရာသီခရီးသွားကာလမှာတင်မကဘဲ ကျန်တဲ့ရာသီများအတွက် ခရီးထွက်လိုသူတွေဒုက္ခမပွေရအောင် ခရီးသွားခြင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ ideasအချို့ကို shareရင်းPackage ကောင်းကောင်းလေးတွေကို …
Mirandus aka Golden Ticket To Your Wonderlust0371
The KaungHtet February 20, 2018 5:20 am August 9, 2018
Shop.com.mm has ventured into travel packages (Mirandus) with the intention to provide best prices to amazing destinations. There are some …
Newsflash! Diapers Are Big Ol’ Sale at shop.com.mm Right Now0347
The KaungHtet February 16, 2018 11:30 am June 8, 2018
It is our priority to make sure our babies’ bum stays clean and comfy. It is also important not to …
shop.com.mm ကနေပြီး Diaper တွေကို အံ့သြစရာကောင်းလောက်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့လျှော့ချပေးနေပါပြီ0320
The KaungHtet February 16, 2018 11:30 am May 3, 2018
ကလေးငယ်လေးတွေ Diaper ဝတ်တဲ့အခါမှာ သန့်သန့်လေးဖြစ်ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိဖို့က အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ Diaperဝတ်တာကြောင့် ယားယံတာမျိုးအပူမိတာမျိုး လည်းမဖြစ်အောင် အမြဲသတိထားရပါတယ်။မွေးကင်းစကလေးငယ်လေးတွေက တနေ့မှာDiaper ၁၀ကြိမ်လဲရတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ တခါတလေကျရင်တနေကုန်ဘာမှမလုပ်ဘဲ Diaperချည်းထိုင်လဲနေရသလိုမျိုးတောင် ခံစားမိကောင်းခံစားမိပါလိမ့်မယ်။ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်တွေ ကိုင်တွယ်ပြီးလုပ်ရတာဖြစ်ပေမဲ့ ကောင်းတဲ့အလုပ်တခုဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ ရပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကလေးငယ်တွေDiaperများများမလဲလှယ်ရလေ ကလေးငယ်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့ …
7 Cute Gifts that will make your girlfriend Say, “Saranghae Oppa” on this Valentine’s Day0348
The KaungHtet February 8, 2018 10:04 am August 9, 2018
If you want your girlfriend to love you more than her Korean idols, you need to use the strategy. You …
ချစ်သူကောင်မလေးက “Saranghae Oppa”လို့ပြောစေရမည့် Valentine’s Day လက်ဆောင်(၇)ခု0359
The KaungHtet February 8, 2018 10:04 am May 3, 2018
ကိုးရီးယားကားကြည့်ရတာကို အလွန်နှစ်သက်သော ချစ်သူကောင်မလေး ရှိပါသလား။ တခါတလေကျရင် ကိုယ့်ထက်ပိုပြီးကိုးရီးယားမင်းသားတွေကို နှစ်သက်နေပြီလားလို့တောင်သံသယဝင်မိလို့ မေးလိုက်မိရင်လည်း “ဟုတ်တယ်သဘောကျတယ်” ဆိုပြီးရွဲ့သလိုလိုချိတ်သလိုလို အပြောခံရတာမျိုးရှိပါတယ်။ သူမပြောတဲ့ကိုးရီးယားမင်းသား၊အဆိုတော်နာမည်တွေကို မမှတ်မိရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်မှာကို စိုးရိမ်တာကြောင့် လူနဲ့နာမည်တွဲမိအောင်လည်း အမြဲမှတ်ရပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့သင့်ကောင်မလေးရဲ့မျက်နှာသာပေးမှုကို ဒီနှစ် Valentine’s day မှာရနိုင်ပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့သူမကျိန်းသေနှစ်သက်သဘောကျလောက်တဲ့ …
Shop App နဲ့အတူ နခေငျြစဖှယျ အိပျခနျးလေးဖွဈအောငျ အလှဆငျကွမယျ
World Bee Day မှာ ပြားရညျမုနျ့တှလေုပျစားမယျ
Daniela Conwill on Well, Well, Well. How should we recover our skin and hair from Post-Thingyan?
Lester Roelle on Well, Well, Well. How should we recover our skin and hair from Post-Thingyan?
ดูหนังฟรี on Shop Seller Service from Shop.com.mm that will provide the best services for sellers
Salena Gerstner on Well, Well, Well. How should we recover our skin and hair from Post-Thingyan?
Daniele Longknife on Well, Well, Well. How should we recover our skin and hair from Post-Thingyan?
❄Air con ကို မီတာခ အရမျးမကုနျအောငျဘယျလိုအသုံးပွုကွမလဲ?❄ 4623
၃ သိနျးကပျြအောကျ Samsung တံဆိပျဖုနျးမြား 3809
အိမျမှာသုံးဖို့ဖွဈဖွဈ၊ ရုံးမှာသုံးဖို့ဖွဈဖွဈ Printer လေးတဈလုံးဝယျဖို့လိုအပျနပွေီလား? 🤔 3411
သငျ့ရဲ့ ဝါသနာကို အခုပဲရှာဖှလေိုကျကွရအောငျ…. 3313
သငျဟာ မိတျကပျတှအေကွောငျးစိတျဝငျစားတဲ့သူတဈယောကျဆိုရငျ ဒီမေးခှနျးတှကေိုဖွကွေညျ့လိုကျပါဦး? 2734